पालुङ्टार ७ मा महिलाहरुका लागी नेतृत्व विकास तथा क्षमता अभिबृद्धि तालिमकाे उदघाटन – गोर्खा संसार
गोर्खा संसार२०७६, १६ असार सोमबार १५:०४
असार १६, गोरखा ।
पालुङ्टार नगरपालिका वडा नं. ७ मा महिलाहरुका लागी नेतृत्व विकास तथा क्षमता अभिबृद्धि तालिम कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । पालुङ्टार नगरकार्यपालिकाकी कार्यपालिका सदस्य सावित्रा वि.क.को अध्यक्षतामा कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो । कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको रुपमा बोल्दै वडा नं. ७ का वडाध्यक्ष बसन्त कुमार श्रेष्ठले वडाबाट हरेक वर्ष लक्षित कार्यक्रम अन्तर्गत महिलाहरुका लागी हरेक वर्ष बजेट विनियोजन गरिएको तर महिलाहरु आफै कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्षम नहुँदा समस्या भएतापनि यस तालिमपछि यस्ता समस्या नहुने बताउनुभयो ।
वडा सदस्य भगवती कुमालले स्वागत मन्तव्य राखेको सो कार्यक्रममा वडाकी परिचालिका निरा अधिकारी, रेडियो छिम्केश्वरीका सञ्चालक शिव कुमार श्रेष्ठ लगायतकाले मन्तव्य राखेका थिए । कार्यक्रमको संयोजन गोरखा संसार मिडिया प्रा.लि.का सञ्चालक एवं रेडियो वन्दीपुर ८८.८ का सञ्चालक समिति सदस्य रविन्द्र कंडेलले गर्नुभएको थियो ।
वडा भित्र रहेका सम्पूर्ण टोलको प्रतिनिधित्व हुने गरी ५० जनाको सहभागिता रहेको थियो । महिलाहरुका लागी कसरी सक्षम बनाउन सकिन्छ, क्षमता बृद्धिको लागी महिलाहरुले गर्नुपर्ने कार्यहरुका बारेमा प्रशिक्षक भगवती कंडेलले प्रष्ट्याउनुभएको थियो । भोली भने सार्वजनिक कार्यक्रम सञ्चालन तरीका, भाषाको प्रयोग, समाचार संकलन लगायतका विषयमा विष्णुकान्त घिमिरे, अमरराज नहर्की लगायतकाले सहजीकरण गर्नुहुनेछ ।